isantya esiphezulu sokungenisa i-tubing yethusi yobhedu kwiivalingi zethusi
I-frequency induction ephezulu yokuthengisa i-tubing yethusi kwiivalali zethusi
U vavanyo: I-Induction ityibilika ityhubhu yobhedu kwizivalo zobhedu
imathiriyeli: Imibhobho yobhedu kunye nobhedu
Izixhobo: Umatshini wokufudumeza we-DW-HF-25kw
iqondo lobushushu: 932oF (500oC)
ixesha: 20 imizuzwana
Esi sicelo sicelo saziswa kwi-HLQ Induction Heating Power ukuze iqwalaselwe yinkampani ye-HVAC. Injongo yabo yayikukuphelisa ukusetyenziswa kwabo kwendlela yetotshi, kunye nokususa iziphene kunye nokuphucula ukhuseleko kubaqhubi. Ukuqala uvavanyo, injineli yethu yesicelo iqokelele ukuseta ityhubhu yobhedu kunye neevili zethusi. Emva kokufaka iflux kumdibaniso ngamnye injineli ibabushushu kangangemizuzwana engama-20. I-Solder yasetyenziswa ngesandla emva kokudityaniswa kwafikelela kwi-932oF (500o C), kwaye yadala i-solder ejikeleze amalungu. Ukusetyenziswa kobushushu bokungeniswa kube yimpumelelo kwesi sicelo se-HVAC.
iindidi Teknoloji tags ukumiswa kobhedu lokuthengisa, ukutyunjwa kokungena, ukutyunjwa kwebhondi, ukutyunjwa kwethusi, umshini wokucoca, i-soldering, itydidering ityhubhu yethusi, ishubhu sobhedu, ityhubhu yobhedu ebhedu ukuya kubhedu Post yokukhangela